Ogaden News Agency (ONA) – Murashaxiinta Madaxtinimada Maraykanka oo Cunsurinimo Isku Eedeeyay.
Donald Trump Murashaxa Madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga Maraykanka ayaa eedeyn cunsurinimo ah kala dul dhacay murashaxada kasoo horjeeda ee Xisbiga Dimuquraadiga Hillary Clinton.
Trump oo xiligan ay soo wajahday cabsi ah inuu heli waayo codod ku filan ayaa olole xoogan todobaadkan u galay siduu ku heli lahaa taageerada dadka laga tiro badanyahay ama Madowga Maraykanka.
Wuxuu khudbadiisii ugu dambeysay ku sheegay in Hillary Clinton ay iyadu tahay qof cunsurinimo ku dhaqanta oo Madowga Maraykanka codkooda kaliya raadisa marka ay tartan ku jirto balse aan dadyowgaasi waxna u qaban.
Hillary Clinton oo arrintan iyaduna si deg deg leh uga jawaabtay ayaa sheegtay in Donald Trump uu yahay kan cunsurinimadiisa aan qarsan isla markaana taageero iyo isbaheysi ka helay ururada cunsuriyiinta ah ee ka jira wadankaasi Maraykanka.
Tartanka doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadkan ayaa u muuqata mid ka duwan kuwii hore, labada murashax ee u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ayaa dagaal culus oon waxba la’isula kala hadhin iswaydaarsanaya, iyadoo ay muuqato inay ku horayso marka lafiiriyo xaga saadaasha Murashaxa Xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton.